Ụbọchị My Pet » 10 Iwu Of dịwara N'ihi Women
emelitere ikpeazụ: Feb. 25 2020 | 3 min agụ
È nwere iwu mgbe akpa? N'ezie, e nwere ndị. Ọtụtụ n'ime ha, n'ezie, ma ọtụtụ n'ime ha na-omenala oyi na ha nwere ike ịdị iche iche site n'otu mba ndị ọzọ na otu agbụrụ ndị ọzọ. Otú ọ dị, e nwere isi iwu na-anọgide na nti nile gburugburu ụwa. Ebe a na- 10 iwu ndị inyom kwesịrị ùgwù mgbe akpa:
1. Return Kpọọ na a Bịara n'Ezi Oge n'ụzọ
Women dị ka na-ewere ha oge tupu-azụ Ihọd onye yiri ka na-amasị ha. Ọ bụrụ na ị nwere mmasị na nwoke, kwa, ị ga-alaghachi ya oku na-aga na a na-adọ n'ụzọ. Ọbụna ma ọ bụrụ na ị chọrọ igwu ike iji nweta, agbalị ịghara n'elu 48 awa ịgba na-enweghị ezigbo ihe mere. N'ịbụ nke obodo bụ agaghịkwa a nti nkọwa. Onye ọ bụla nwere a na ekwentị mkpanaaka na n'oge, ma ọ bụ ihe fọrọ nke nta ka onye ọ bụla.
2. Sọpụrụ gị Nkwa
I nwere ike iche na ọ bụ mfe n'ihi na ndị ikom karịa n'ihi na ndị inyom na ọhịa mkpakọrịta nwoke na nwaanyị ọhịa. Kwere ya ma ọ bụ, nke a abụghị eziokwu. Ọ bụghị mgbe nile mfe inwe obi ike iji na-ajụ a nwaanyị. Ọ bụrụ na o mere ya, na ị sị na ee, na-agbalị na-arapara atụmatụ gị. Adịghị nnọọ na-akpọ ịkagbu ke akpatre nkeji. O nwere ike na-echiche na ị bụghị na ọtụtụ n'ime ya. Ọfọn, ọ bụ n'ụzọ zuru okè ezi agaghị na-, ma ndị dị otú ahụ a bụrụ na ị gaghị ekweta na akpa ebe.
3. Ka Ya-ebute Ụzọ
Ndi emi iyi kwa ochie gaferela n'ihi na ị? Ị pụrụ anya ịchọpụta na ọtụtụ ihe na-ka mere ochie akwụkwọ ụzọ. Ọtụtụ ná ndị ikom-enwe obi ụtọ dinta, dịkarịa ala a ntakịrị. Ka onwe gị ejide, ma nyere ya aka ma ọ bụrụ na mkpa site n'izite ya ikike n'ókè.
4. Ọ dịghị Ex Okwu
Hapụ isiokwu a a chit chat gị girlfriends! A ọṅụṅụ n'etiti ụmụ agbọghọ bụ a ọtụtụ ihe ndị ọzọ kwesịrị ekwesị ọnọdụ na-ekwurịta banyere gị bụbu. Enweghị ndidi zoro ezo banyere ya, adịghị ekpughe gị niile muddied gara aga n'oge mbụ ogbo nke mmekọrịta gị.
5. Nọgidenụ na-Ndozi na Ọchị
A ọchị bụ oké ọnụ ahịa karịa a ton nke-eme ka elu. Ọ na-eme ihu gị na-enwu na-ahapụ gị nwere n'anya ịhụ ndị kasị mma nke ị. Ezie na a ụbọchị, gbalịa ilekwasị gị ntị na ya, ma zere mbịne gị isi mgbe ndị ọzọ ụmụ okorobịa, n'agbanyeghị otú na-ekpo ọkụ, ha nwere ike ịbụ. Na-ege ntị ihe ọ na-ekwu, ịnọgide na-enwe anya, na-ekere òkè. Nke ahụ bụ àgwà a, nwoke ga-atụ anya. Ọ bụrụ na ị na-elu ilu, dọpụ uche, na mwute, ọ nwere ike ichefu na-akpọ e mesịa.
6. Unu na-aṅụ ukwuu
The ikuku ala na nkịtị. Ihe niile yiri ka a ga-arụ ọrụ dị nnọọ mma. Ị na-eche nwaa ihe ole na ole ma ọ bụ cocktails iko nke mmanya. Emela! Ọ dịghị onye na-ekwu, ị na-agaghị ekwe ka aka na-aba n'anya. Dị adịghị overdo ya. N'ihi na o nwere ike ịbụ ka sexy dị ka ị na-eche.
7. Ị na-adịghị anya ka a gold digger
Gịnị ka ị na-ahọrọ, ịchọta gị soulmate, ma ọ bụ a nwa oge ego isi iyi. Unu na-akpa àgwà dị ka ma ọ bụrụ na ọ bụ gị akụ. Ọ bụrụ na o kpebie ịzụta a ugbu a n'ihi na ị na-, anabata ya, ma adịghị arịọ maka ya. Ọzọkwa, anaghị ekweta ya na-akwụ ụgwọ gị mgbazinye, ma ọ bụ na-enye gị a kwa ọnwa ego dị ka ọ pụrụ nnọọ ejedebe mmetụta dị ka ịzụ ịhụnanya gị.
8. Nwee a nwaanyị
Cheta isi iwu nke omume ndị mụrụ gị kụziiri gị mgbe ị bụ a eyen? Ha ka na-itinye n'ọrụ mgbe akpa. Echefula gị àgwà na-na-eji oké ọnụ ahịa okwu "biko" na "na-ekele gị" ọbụna ma ọ bụrụ na ị maara ya nke ọma na-ama. Tụkwasị Uche gị postcho na adịghị agbasa gị ụkwụ na-emeghe ka a Dude ọbụna ma ọ bụrụ na ị bụ yi uwe ogologo ọkpa. A nụchara anụcha nwaanyị anaghị echefu banyere ihe ndị a obere isi iwu ọbụna mgbe afọ nke alụmdi na nwunye.
9. Gosi mmasị gị
Ịṅa ha Ihọd a otito bụ ihe ọtụtụ mgbe ndị inyom na-eme echefu. Ndị ikom na-dị nnọọ ka chebaara ọmarịcha okwu na mmegharị dị ka anyị. Unu oge ịgwa ya na ya na-ese akwa ọhụrụ ahụ na uwe elu ọ na-etinye on karịsịa n'ihi na ị. Gosi mmasị gị site na-eme ihe dị mma maka ya! Ọ na-ewe gị ka nri abalị? Gịnị mere unu adịghị ịkpọ ya ka gị ebe a n'ụlọ mere nri abalị n'ihi na a mgbanwe? Ị maara ihe kasị amasị ya kuki na-? Lee maka Ntụziaka na akpọọ nkụ a mma ogbe ya. Dị Mfe mmegharị dị ka ndị a na-eziga ozi. Ha ga-egosi na ya na ị na-eche na ị na-eme mgbalị, kwa.
10. Unu ga-esi gba ọtọ na mbụ ụbọchị
Ịhụnanya anya otu nhụ anya? Ọtụtụ ndị mmadụ ga na-arụ ụka na ọ bụ nanị ndisịme. Ma, ka asị na ị dara na ịhụnanya si akpa oge gị ịtọ anya na onye ọ bụla ọzọ na ọ bụ ibe. Otú ọ dị, agbalị ezere na-gba ọtọ na mbụ ụbọchị. Ị nwere ike susuo na-amakụ, ma na-ewere ya jiri mgbe niile nwere ya uru. Olee otú ọzọ ị ga-ekwu okwu banyere-eme ịhụnanya na ọ bụghị naanị mmekọahụ?